Amanqaku kaMat Shanahan Martech Zone |
Amanqaku ngu UMat Shanahan
UMat Shanahan nguCMO e Azuqua, Inkampani enceda amashishini azenzekelayo ukuhamba komsebenzi phakathi kwezicelo ze-SaaS, kubandakanya ezentlalo, i-imeyile, ukuthengisa okuzenzekelayo okanye iinkqubo zeCRM ezibaluleke kakhulu kwimpumelelo yabathengi. UMatt uneminyaka engama-30 yamava kwishishini lobuchwephesha, ukusuka kwi-Accenture ukuya kwi-startups. Ungusomashishini oqinisekisiweyo njenge-VP yentengiso yemveliso kunye nolawulo lwe-Documentum ukusuka ekuqaleni ukuya ekunikezelweni koluntu kwasekuqaleni kwaye kutsha nje njengomseki-siseko kunye ne-SVP yesicwangciso seScout Analytics.
NgoMvulo, Novemba 23, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UMat Shanahan
U-Kate Legett, i-VP kunye nomhlalutyi oyintloko e-Forrester kwi-blog ka-Septemba ka-2015 ebhalwe eposini, i-CRM iyaqhekeka. Ngumxholo ophikisanayo: Gcina amava abathengi ngaphambili nakwiziko lenkampani yakho. Qiniseka ukuba uyabaxhasa abathengi bakho ngohambo lwabo lokugqibela ukuya kolokugqibela ngokuzibandakanya okulula, okusebenzayo, nokonwabisayo, nokuba uhambo lomthengi luwela amaqonga etekhnoloji. Ukwahlulwa kweCRM kudala iintlungu eziqhekezayo kumava abathengi. Ingxelo yeLifu ka-2015